प्रधानमन्त्री देउवाले जोडदार रुपमा यसरी उठाए कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको मुद्दा, मोदी भए निलोकालो ! (भिडियोसहित) | Prahar News
प्रधानमन्त्री देउवाले जोडदार रुपमा यसरी उठाए कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको मुद्दा, मोदी भए निलोकालो ! (भिडियोसहित)
नयाँदिल्ली — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग नेपाली भूमिबारेको मुद्धा उठाएका छन् । देउवाले मोदीसँग सीमा विवादको कुरा उठाएको बताएका हुन् । देउवाले सिमा बिषयको मुद्धा उठाउदा मोदीले टाउको निहुराएका थिए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल–भारतबीचको सीमा विषयलाई स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान गर्न आफूले समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई भनेको उल्लेख गरेका छन् ।
हैदराबाद हाउसमा शनिबार भएको द्विपक्षीय भेटवार्तापछि भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले भने,‘हामी (देउवा र मोदी) ले सीमा विषयका बारेमा छलफल ग¥यौं । र, मैले मोदीजीलाई यो विषय द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान गर्नका लागि आग्रह गरेका छौँ ।’
नेपाल र भारतबीच पछिल्लो समय सीमा विवादका कारणले गर्दा समस्या भइरहेको छ । दुई मुलुकबीच सीमा समस्या समाधानको लागि पटक–पटक पहल भए पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।
सन् २०१४ मा मोदीकै नेपाल भ्रमणका दौरानमा सबैभन्दा बढी विवादमा रहेको कालापानी क्षेत्र र सुस्ता क्षेत्रका लागि वार्ता गर्नको लागि परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र बनेको थियो । जसको अहिलेसम्म बैठक बनेको छैन ।
भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक बनाएपछि दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध चिसिएको थियो । केही समयअघि मात्रै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले उक्त सडक निर्माणमा तीव्रता दिएको बताएका थिए । भिडियो स्रोतः सूत्र टिभी